Gịnị bụ Borlndmm DLL? - Faịlụ
Isi > Faịlụ > Borlndmm.dll na-efu - otu esi edozi
Borlndmm.dll na-efu - otu esi edozi
Gịnị bụ Borlndmm DLL?
wdgbụ a na-ebugharị na obere nke nwere ngwa Windows Windows.Nnọọ.wdgbụ ike njikọ n'ọbá akwụkwọ faịlụ a na-ejikarị ụfọdụ kọmputa software na e mere maka Windows sistemụ.Jul 25 2018
Enwere m DLL ebe a ka m ga - eji mepụta ọrụ omenala 64-bit maka ntọala ọ bụla. Ọbá akwụkwọ a nwere otu akpọrọ unit 1 dot s ma enwere ọrụ na ngalaba a nke na-akọwa usoro maka ogologo ọrụ ana-ebupụ na DLL yana ogologo ọrụ ahụ bụ na ụbọchị dị elu nke onye ọrụ nọ na onye ọrụ nchekwa data maka interface na-eji na n'ime isi ọrụ na-eji iji itapia dị n'ime isi ala n'ime a oge na ụbọchị. Mgbe ahụ, m na-eji ụbọchị encode iji tugharia oge na ụbọchị n'ime ihe ụbọchị ụbọchị Delphi T Mgbe ahụ n'ikpeazụ, m na-eji ọrụ ahụ ọtụtụ afọ n'etiti taa ma ọ bụ ugbu a na nke a Delphi Paton, yabụ enwere ọtụtụ mpaghara interface ndị na-abịa na nke ahụ nye gi interface ka ufodu udiri data di n'ime interface ahu, ya mere ana m eji ufodu ndi a ebe a ibx ma mu abu ndi ozo na IBinterfaces.
Ihe kpatara nke a bụ na oge Inbọchị Innerbase a bụ ụbọchị ụdị nke ime ya, im rastdị iche na ụbọchị nkewa. Oge na-ewuli koodu ogologo nke ọrụ m na-ebupụ na DLLI m maka ya maka 64 bit Windows ma ka anyị jide n'aka na ọ ruru ụbọchị ma m depụtaghachi ma detuo DLL a bụ ebe a ka m ga-esi ihe nkesa 64-bit base server na-agba ọsọ ma tinye ya na akwụkwọ ndekọ UDF, demos their base 64 bit UDF 164 release na nke a bụ DLL nke a chịkọtara taa Disemba 20, yabụ ka anyị copyomie nke ahụ na UDF ma dochie nke ahụ, mgbe ahụ, m ga-akpọ IB console ma jiri IB console iji wụnye UDF ma mee ka ndị ọrụ nchekwa data mara ya. A na-eji syntax a ikwupụta ọrụ mpụga.
Aha nke ogologo ọrụ nke ọrụ na-ewe ụdị ụbọchị ma weghachite ọnụ ọgụgụ na ntinye ntinye bụ aha nke mbupụ ọrụ ogologo gosipụtara nke gosipụtara ọrụ ahụ site na aha modulu aha IB-Demo-UDFs DLL, nke dị n'elu ndekọ UDF na mgbe m nwere andmụbawanye na ndị ọrụ nchekwa data na ihe njikwa na-aga na mpụga ọrụ, M na-ahụ ọrụ a na-akpọ Ogologo Ọrụ, ọ bụ na modul IV-Demo U DFDLL na ọrụ bụ mesie ọrụ. Ugbu a enwere m ike ịhụ na a na-ekwupụta Iran site na ịfe ya na ngwa njikwa. Ugbu a, a maara ọrụ omenala nchekwa data na m ga-anwale ya naanị ịme nyocha na-aga n'ihu, were nọmba ndị ọrụ na aha zuru oke, wee kpọọ oge ọrụ ọrụ site na ịgafe kọlụm ahụ na-egosi nke ọma, yabụ ka anyị laghachi lee anya na IPconsole ma lee tebụl na tebụl onye ọrụ ma lee aha zuru ezu nke agbakọtara site na ịmekọrịta aha mbụ na aha ikpeazụ na m nwere ụbọchị dị elu na ụdị timestamp a bụ na m weghachitere gị nọmba ndị ọrụ na ebe a anyị nwere ndị ọrụ nwere data dị elu mgbe anyị na-aga windo mmekọrịta anyị na tebụl ndị ọrụ, yabụ m na-ahọrọ aha onye ọrụ m aha zuru oke ma gosipụta ogologo oge site na ọrụ ma anyị ga-agafe ụbọchị ọrụ ndị ọrụ, anyị ga-eme ya na ndị ọrụ ntọhapụ, ugbu a anyị enwetala ọnụọgụ ee ọrụ nke ọrụ site na ụbọchị ọrụ ha ruo taa iji hụ ndị ọrụ anyị ogologo oge, yabụ ana m agba Ajụjụ ọnụ 64 na desktọọpụ Windows 64 m n'ihi na m bụ Delphi 64-bit nwere.
Enwere m ike ịchịkọta 64-bit dll dị ka UDF ma ọ bụ Interbase 64-bit enwere m ike ịga mee nkwupụta ọrụ mpụga na mpaghara etiti wee mee ịga n'ihu site na njikwa ma ọ bụ site na ngwa m ma jiri ọrụ ndị ahụ, dị ka ọ bụ ọ dị mfe ugbu a ịmepụta ọrụ ndọtị maka isi ime64 ebe m nwere Delphi 64-bit
Mgbe koodu achọrọ, achọrọ faịlụ dị n'ime ebe nchekwa ma jiri ya. Mgbe ahụ mepee sistemụ arụmọrụ gị maka nsogbu, ọ bụrụ na sọftụwia ahụ enweghị ike ịchọta faịlụ DLL na ajụjụ ma ọ bụ ọ bụrụ na faịlụ DLL mebiri emebi, mgbe ahụ ị ga-enweta ozi na faịlụ ahụ na-efu. I nwere di na nwunye nke kwere omume ngwọta.
Gbaa ngwa nyocha usoro ihe eji arụ ọrụ. Gbaa Dis sim idozi ma ọ bụ tinyegharịa sọftụwia na - akpata kọmpụta ikuku. Detuo DLL site na sistemụ ọzọ ma weghachite ya na PC gị, budata faịlụ DLL ndị ọzọ.
Ugbu a jidere ụlọ mmanya Snickers n'ihi na ọ na-ewe nkeji iri na ise. Ozugbo emere ya, ikwesiri ịmalitegharị kọmpụta gị. Ọ bụrụ na edozibeghị nsogbu ahụ, gbalịa na-agba ọsọ DISM.
Nke a nwere ike ịpụta na ị ga-edebanye aha DLL ọzọ ma enwekwara nhọrọ ịchọta DLL na onye nrụpụta ngwanrọ wee budata ya na weebụsaịtị ha. Ugbu a, ọ bụrụ n'ịhọrọ ịgbada n'okporo ụzọ a, gbaa mbọ hụ na enweghị m ike imesi nke a ike na DLL sitere n'aka onye nrụpụta. Nke a bụ n'ihi na o yikarịrị ka ikike DLL nwere ikike nwebisiinka ma ọ bụrụ na o sitere na saịtị ndị ọzọ, ị gaghị ekwenye na ọ bụ faịlụ ahụ n'ezie yana na agbanwebeghị ma ọ bụ nwee malware agbakwunyere na ya.
Mgbe ahụ enwere ihe m kpọrọ nhọrọ nuklia. Naanị iwepụ wee tinyegharịa sọftụwia ahụ ma dabere na ntọala gị, nke a nwere ike ịbụ nhọrọ ka mma maka oge na isi ọwụwa. Ọ bụ naanị ihe ị ga - ahọrọ dịka oge na mbọ anyị, M, na - agabakarị nuklia.
iwepu onenote 2013
Kedu ka m ga esi edozi MSVCP140 DLL na-efu efu?
Gbalịa ihe ndị andozi
Tinyegharịa ngwugwu Microsoft Visual C ++ Redistributable.
Mee usoro ihe omume a dị ọcha.
Detuo faịlụ ọzọ tụkwasịrị obi na kọmputa.
Gbaa nje virus maka sistemụ gị.
Gbanwee na ChromeOS.
kedu ihe ụmụ nwoke nabatara na channel anyị etechniz n'isiokwu a anyị ga-ekwu maka idozi mmalite msvcp140.dll na vc runtime140.tll setup 0xc 0007b nke anaghị emepe. anyị ga-atụle otu esi edozi ihe a niile ma anyị ga-enye gị usoro ise iji dozie nsogbu ahụ ma ọ ga-edozi nsogbu gị n'ihi ya nọrọ na-ekiri na-ekiri isiokwu zuru ezu tupu ịga n'ihu, ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ tupu ịga n'ihu, ọ bụrụ ị dị ọhụrụ na ọwa a pịa bọtịnụ 'denye aha' họrọ ihe niile na ọkwa mgbịrịgba ahụ na-enye mkpịsị aka aka maka ịhapụ edemede a na nzaghachi na ngalaba nkọwa tupu anyị agaa na Nchọpụta nsogbu Jide n'aka na ị ga - eme ihe ole na ole iji bido na-eme usoro ndị dị mkpa na nkuzi a na anyị ga-edepụta ihe niile site na ndị dị mfe ka ị nwee ike idozi njehie mgbọrọgwụ gị na enweghị nsogbu na akaụntụ nchịkwa site na nzọụkwụ 1 Biko banye na akaụntụ nchịkwa gị iji gafee nsogbu niile. Nzọụkwụ iji hụ ma ị nọ na akaụntụ nchịkwa ma ọ bụ na ọ bụghị Pịa akara ngosi Windows, tinye akara ebe a Pịa Pịa Mepee Pịa na Akaụntụ Akaụntụ pịa Akaụntụ Onye Akaụntụ ọzọ dịka ị pụrụ ịhụ na ọ na-egosi m e etechniz onye njikwa akaụntụ mpaghara Ọ bụrụ na ị banyere onye nchịkwa a ebe a in na akaụntụ nchịkwa gị, ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ị nwetara nke a, ị ga-ahụ ndabara ebe a.
Ọ bụrụ na ị nweta ọkọlọtọ ị ga-abanye na akaụntụ onye nchịkwa gị. Nzọụkwụ 2 Gbanyụọ antivirus. Oge ụfọdụ mmemme antivirus na - ebute ọtụtụ nsogbu mgbe anyị na - anwa ịgba ọsọ ngwa na PC anyị, yabụ ọ dị mkpa iji gbanyụọ ya na kọmputa gị.
Agbanyeghị, ana m akwado ka ị dozie nsogbu mgbe antivirus gị na-agba ọsọ na PC gị. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ịkwesighi ịgbanye ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, chọta njikọ na nkọwa maka Gbanyụọ Antivirus gị.
Lelee ederede a ma ị ga - enwe ike iwepu nje gị niile n’oge na - adịghị anya. Ọ bụrụ na ị nwere antivirus dị iche, enwere ihe ole na ole ị nwere ike ịlele na ala aka nri. Up Arrow need kwesịrị pịa akụ a na ihe niile nke gị nje ga-depụtara na a usoro tree.
All ị ga-eme bụ nri pịa ya na ị ga-ọkọnọ na nhọrọ iji gbanyụọ ya. Nzọụkwụ 3 Budata msvcp140.ti na vc na-agba ọsọ 140 .tll Ndị a bụ faịlụ dị mkpa ịchọrọ ibudata iji mepee ihe nchọgharị Google Chrome gị ka ị nọ na Nchọta Nchekwa nke Google Advanced Page Recommendations nyere Ọ bụrụ na ịchọghị obi ọjọọ webusaiti ka edeputara n’ime nchọta google gi ma ichoro ka nyocha gi nọrọ n’udo ma ị nwere ike inyocha google n’ebe a.
Ha anaghị echekwa data ọ bụla nke mere na ọ bụ ezigbo nchekwa na nchekwa maka gị ebe a, pịa msvcp140.dll, ị ga-ahụ ntinye ebe a pịa nsonaazụ mbụ ị ga-ahụ peeji a n'ihu gị. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị 64-bit nke Windows, pịa ebe a.
Ọ bụrụ na ị nwere 32 bit version ije pịa ebe a dị ka m nwere 64 bit version ije pịa ebe a mana achọrọ m ịgwa gị otu esi elele obere ụlọ gị na keyboard mgbe ị na-ejide igodo Windows wee pịa ịkwụsịtụ ị ga-ahụ ozi gbasara gị sistemụ sistemụ dịka ị ga - ahụ na enwere m sistemụ 64 bit yabụ m ga - ebudata faịlụ 64 bit ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgba ọsọ windo akara ngosi ma kwusi nkwụsịtụ. Wee pịa akara ngosi Windows a. Pịa na ntọala ị nọ na ibe a.
Pịa na usoro pịa n'elu ma ị nwere ike ịhụ ụdị sistemụ gị ka m pịa budata dịka ị nwere ike ịhụ na mgbe nbudata ya ebudatara na PC m. Achọrọ m ibudata faịlụ ọzọ dịka m gwara gị maka vcruntime140.dll nke abụọ wee banye ebe a wee pịa ọchụchọ ị ga-ahụ otu weebụsaịtị ị ga-ahụ ntụpọ dll file.
Pịa na nsonaazụ a. Pịgharịa gaa na ala. Họrọ faịlụ gị dị ka ụdị bit gị wee pịa Download dị ka ị pụrụ ịhụ na ebudatara na sistem m.
Pịa Gosi ihe niile, pịa Gosi na folda ahụ, họrọ ma wepụ ma wepụ ma ị nwere ike ịhụ. Enwere m faịlụ ndị a kpọpụtara ebe a. Ugbu a, anyị kwesịrị ịme 4 ma tinye faịlụ dll na folda syswow64.
mperi koodu 0x8e5e0247
Mbụ m nwere idetuo ma faịlụ otú ahụ ka m ịkpali a faịlụ ka download nchekwa, Amaara m na e nwekwara ndị kacha ụzọ ma ọtụtụ ọrụ amaghị otú e si eji nke a mma. Ya mere ana m eme nke a n'ụzọ kachasị mfe m nwere ike igosi gị faịlụ abụọ iji mado na folda ahụ na keyboard gị na ala aka ekpe enwere igodo Ctrl, pịa ma jide igodo Ctrl wee pịa faịlụ a ozugbo ahọrọ faịlụ a Pịa na nke a ị ga-ahụ vcruntime140.dll ugbu a pịa nri wee pịa 'detuo' pịa pc abụọ a na pịa na draịvụ ike mpaghara ugboro abụọ na windo ebe a ịchọrọ ịchọ folda syswow64 ozugbo n'ime folda ahụ, pịa ugboro abụọ na ya, pịa aka nri na mado faịlụ dll ebe a, pịa aka nri ma pịa pasta pc gi ga-aju onye ikike ka o nye gi ikike ka o nye gi ssion i intoomi n'ime ihe nchekwa a runtime niile-na-otu software ka m gosi gị otu ị ga-esi chọta ya.
Na nchọta ebe nchekwa, pịnye nbudata na-ahụ anya gbakwunye oge na-agbakwunye ma na-abanye abanye. Ga-enweta nsonaazụ a. Pịa na ya, pịa Download ebe a ma gbaa mbọ hụ na ị họrọ ibu nkesa kachasị dị ala dịka ị nwere ike ịhụ na ọ na-egosi m ihe nkesa na-ebu pasent anọ na-ebu pasent atọ pasent abụọ na otu pasent otu pasent wee họrọ nke a ma ọ malitere site na nbudata ya na PC gị .
Ka anyị chere ka ebudata ya na PC gị. Ọ dị mma, ebudatara ya. Pịa akụ a ma pịa ebe a Mepee.
Pịa aka nri ma pịa Mepee pịa Wepụ ozugbo ọ mere ugboro abụọ pịa ya, ugbu a, ọ ga-etinye mbipute 2005-2019 C tinyere mbipụta redistributable. Ya mere, mgbe a jụrụ gị gbasara Akaụntụ Akaụntụ Onye njikwa, ị ga-pịarịrị mgbe ọ bụla ọ bụ ins, m gụrụ ya visual c tinyere gbakwunyere 2011 2012 ka ị pịa pịa oge ọ bụla ị ga - ahụ nọmba ebe a. Nke a bụ usoro dị ogologo.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ezigbo ngwaike PC nhazi ọ gaghị abụ ogologo oge mgbe ọ gwụchara, pịa mmalite wee mepee ya ka ịkwesịrị idozi njehie a nke bụ maka taa ịhapụ nzaghachi na ngalaba nkọwa ma ọ bụrụ na nsogbu gị bụ edozi ma ọ bụ na-enweghị ekele maka ikiri. Nwee ezigbo oge
Kedu ka m ga esi esi wụnye faịlụ DLL na-efu efu?
faịlụ dllna sistemụ arụmọrụ gị Windows.
Chọta gịna-efu efu.faịlụ dllnaWdgEbe mkpofu.
Budatafaịlụma detuo ya na: 'C: \_ Windows \_ System32'
Pịa Malite wee Gbaa wee pịnye na 'regsvr32 name_of_dll.wdg'wee kụrụ banye.
Kedu ihe kpatara m ji enweta njehie borlndmm.dll?
Njehie borlndmm.dll nwere ike ịpụta site na faịlụ rụrụ arụ n'ime ndekọ Borland / Delphi nke mgbe eburu ya na-akpata njehie borlndmm.dll ka ọ pụta ìhè. Iji dochie faịlụ ahụ ma gbochie njehie a: Kpọgharia aha borlndmm.dll dị ugbu a ka borlndmmBACKUP.dll
Kedu faịlụ DLL maka faili njikwa ebe nchekwa Borland?
Borlndmm.dll - dll faịlụ a na - akpọ 'Borland Memory Manager' bụ akụkụ nke Borland Memory Manager mmemme nke Inprise Corporation mepụtara. Applicationsfọdụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu nwere ike ịchọ faịlụ a ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Olee otu idozi njehie metụtara.dll faịlụ?
Iji dozie njehie metụtara na .DLL faịlụ ịkwesịrị ibudata borlndmm.dll ma detuo ya na folda nrụnye nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu ahụ, ma ọ bụ detuo ya n'ime folda sistemụ Windows ma ọ kwesịrị idozi njehie ahụ. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi etinye faịlụ a, biko gụọ nkuzi anyị gbasara Otu esi etinye faịlụ DLL.